Mandalas🥇 Pinda uye unakirwe kubva kuMandalas.wiki
Mandalas Iwo magadzirirwo anofadza vanhu vazhinji uye anounza chaizvo mabhenefiti kune pfungwa. Chekutanga pane zvese, zvinodikanwa kuti uzive kuti kugadzira madhirowa mune chimiro chedenderedzwa chinhu chekare kwazvo.
Zvinyorwa zvekutanga zvemandala zvakabva muzana ramakore rechisere, mudunhu reTibet. Kupararira zvakare mune dzimwe nyika dzinoverengeka dzeEast, senge India, China uye kunyangwe muJapan Munzvimbo dzese izwi rekuti mandala ndi chirevo chinobva muSanskrit , zvinoreva denderedzwa. Ivo anowanzo shandiswa mumitambo yechitendero kana senzira yekufungisisa panguva yekufungisisa.
Muchinyorwa chino iwe unodzidza zvakawanda nezvenhoroondo yeiyi yekare hunyanzvi inoenderera nanhasi uye uone kuti ndezvipi zvakanakira muviri nepfungwa. Zvakare nekuti zvakajairika kuwana mabhuku nokuti kuchena uye nyora iyo inomiririra mhando dzakasiyana dzemandala.
Chii chinonzi mandalas?
Mandala ishoko rinobva mumutauro weSanskrit, iro rinoonekwa semutauro wakafa uye rinoreva denderedzwa. Nekudaro, kunyangwe nanhasi, chiSanskrit inoonekwa seimwe yemitauro 23 yepamutemo yeIndia, nekuda kwekukosha kwayo kuHinduism neBuddha.
Nekudaro, mandalas magadzirirwo e concentric geometric maumbirwo . Ndokunge, ivo vanokura kubva panzvimbo imwechete. Kubva pakutanga, iyo madhirowa anonzi yantras , rinova izwi rinotorwa kubva mumitauro inotaurwa muHindustani peninsula yechiridzwa. Ndokunge, mamandala inzira dzekuzadzisa chimwe chinangwa kwete chinangwa pachacho.
Izvi zvinangwa zvine chinangwa zvinoshanduka zvinoenderana neimwe yetsika dzavanocherechedzwa. Mune mazhinji acho, mandalas anoshanda senge fomu yekufungisisa yekufungisisa. Kuva kwete kwete chete mafungire emafomu, asi kuvakwa kwekudhirowa kwakanyanya kukosha.
Iwo maumbirwo anogona kugadzirwa aine akasiyana zvinhu, asi iwo anogara ari akanyanyisa mavara. Nzira yakajairika yekugadzira mandalas iri kuburikidza yeinki dzine mavara pabepa kana kanivhasi. Nekudaro, mamwe maBuddhist matembere anochengetedza tsika yekugadzira mandalas nesimbi kana huni.
Kune imwezve nzira yekugadzira mandala yakatonyanya kukosha, iyo inoitwa nemamonki echiBhudha mune mamwe matembere kutenderera pasirese. Mune aya matembere, mamonki akadzidza hunyanzvi hwekugadzira mandala na jecha rine ruvara mumakore. Iyo yekudhirowa inogona kutora maawa kana mazuva kuti apedziswe uye kana iyo dhizaini yapera iyo inokurumidza kuparadzwa. Ipapo chete ndipo panoshandiswa kuraswa murwizi. Iyi hunyanzvi inoshumirira kumiririra kuti zvese muhupenyu zvinopfuura.
Dzakasikwa kupi uye riinhi?
Iwo ekutanga marekodhi emandala ekugadzira akatanga kumashure XNUMXth century, mudunhu uko Tibet . Kubva pakutanga, vanodhirowa vaishandiswa muchitendero chechiBhudha senzira yekusimbisa nekubatsira mukufungisisa.
Munguva imwecheteyo mandala akawanikwawo mumatunhu eIndia, China uye gare gare muJapan, saizvozvo, kwete muchiBuddha chete, asiwo muchiHindu uye kunyangwe muchiTaoism, uko zviratidzo zveyin neyang zvinoonekwa semandala .
Zvisinei, zvitendero zvese zvinobata mifananidzo sechinhu chitsvene , iyo inowanzo mirira denderedzwa rehupenyu. Mune zvimwe zvinhu zvechiBuddha, mandalas anoratidzwa semadzimba evamwari uye nekudaro anoera.
Nekudaro, kunyangwe hazvo zvinyorwa zvekutanga zviri pamutemo zvakabva kuMabvazuva, zvakaonekwa kuti vagari vemunyika yeAmerica vakashandisawo zvimiro zvejometri mumitambo. Kunyanya muzvitendero zvine chekuita nekuporesa. Pakati pezana ramakore regumi nematanhatu negumi nemasere, kereke yakatanga kushandisa madhirowa mu hutsvene hutsvene uye girazi rakasviba mukati importantes zvivakwa .
Munguva imwecheteyo, iyo pfungwa yealchemy yakapararira, uko mazana emasayendisiti aidzidza nzira dzekushandura zvinhu. Mandalas yakaverengerwa mune izvi, nekuti iwo madhizaini anoonekwa mune akati wandei mameseji ezvinyorwa akanyorwa panguva iyoyo. Nekudaro, zvinozivikanwa kuti munhu anga agara aine kumwe kufadza kwenzira iyo mifananidzo inogadzirwa, inoenderera nanhasi.
Sezvatotaurwa, iko kushandurwa kweshoko mandala kubva kumutauro weSanskrit ndeye denderedzwa. Denderedzwa iri rave richishandiswa kwemazana emakore se mumiriri wekupfuura kwehupenyu kana kunyange dzimbahwe ramwari idzo dzinofanira kunamatwa. Zvisinei, izvi zvinogona kusiyana netsika nemagariro.
Semuenzaniso, muHinduism mandalas anoshandiswa kumiririra hupenyu maererano nemasikirwo echisiko. Pano, ivo vanomiririra kusangana uye kuwirirana mune zvese zvinoda kuitwa.
MuBuddha, vane simba zviridzwa zvekufungisisa sezvo ivo vane kugona kukwevera kutarisa kune avo maumbirwo uye mavara. Muchitendero ivo vanogona vachiri kushandiswa kumiririra hupfupi hwehupenyu, pavanogadzirirwa nejecha uye nedzimba dzavamwari.
Mutsika dzeTaoist, iyo yang yang uzivi inoshandisa inomiririra mamandala. Pano, kubatana kwezviratidzo zviviri kunoumba hwakazara uye kunomiririra chiyero chinofanirwa kuchengetedzwa mumativi ese ehupenyu. Mumadhorobha epamberi pekoloni, zvisinei, pane zvinoratidza kuti iyo mifananidzo yakashandiswa mumitambo yekurapa.
Ndeapi marudzi emandala aripo? 🙂
Sezvambotaurwa, zvakasiyana siyana zvigadzirwa zvinogona kushandiswa pakuvaka mandalas. Neiyi nzira, yega yega inomiririra chimwe chakasiyana, senge hutano hwemunhu kana hutano, kana chikashandiswa sechipo kune mumwe munhu. Tarisa pano mhando huru dzemandala uye izvo zvavari.
Sand mandalas ndiyo tsika pakati pevatongi veTibetan. Mune hunyanzvi uhu, vanodhirowa vanoitwa pasi nejecha rine ruvara uye chiri chinhu chetsika mutsika dzechiBhudha.
Asati atanga kugadzira mandala ejecha, mamonki akadzidza hunyanzvi kwemakore uye anofungisisa mazuva pamberi pekugadzirira. Basa rinowanzo tora maawa kugadzirira uye pakupedzisira zvinhu zvese zvinokandwa murwizi kana imwe sosi yemvura inoyerera.
Pfungwa ndeyekumiririra iyo hupfupi hwezvinhu zvese zvehupenyu , sezvo zvese zvichapera muawa imwe chete. Mupfungwa iyi, ivo vanomiririra nyowani tanga sezvo zvinogara zvichikwanisika kugadzira jecha idzva dhizaini.
Mumwe muenzaniso wetsika yechiBhudha ndeemandala akagadzirwa nezvinhu zvakaita sehuni kana iron. Pano vanogona kutora matatu-mativi maumbirwo uye anowanzo shandiswa se mumiririri wemba yemumwe mwari.
Izvo zvinoshandiswa zvakanyanya sezvipo. Mupfungwa iyi, maitiro acho anotongwa netsika dzakasiyana uye tsika, zvinoreva kufarira, nekuti zvakanaka kugamuchira mandala sechipo kubva kune mumwe munhu.
Mutsika yechiHindu zvakajairika kuti uwane mandala akapendwa mumatembere akasiyana siyana uye nedzimwe nzvimbo dzinoyera. Mivara yakajeka inoshandiswa mune aya matekinoroji, ayo anowanzo kuve zvinomiririra zvakasiyana chakras yemuviri munhu. Mutsika yechiHindu ivo vakaita senzvimbo dzesimba, dzinopararira mumuviri wese wemunhu.
Nenzira iyi, ruvara rwemavara anoshandiswa mumadhirowa ingave nzira yekugadzirisa zvekare chakras uye kubvumira kutenderera kuri nani kwesimba. Nekudaro kuve nechokwadi chekuvandudzwa mune zvese zviri zviviri mweya uye panyama pfungwa yehupenyu.
Nzira yekudhirowa mandala kumba?
Mamonki anodzidza kwemakore kugadzira mandala ane mavara. Nekudaro, nekuita zvishoma kuita zvinokwanisika kutora mabhenefiti eiri hunyanzvi, pasina basa rakawandisa. Kuti uite izvi, unogona kudhirowa ako maumbirwo nekutevera mamwe akareruka matipi uye kunyangwe mavhidhiyo paYouTube.
Chekutanga pane zvese, iwe unofanirwa kudhirowa denderedzwa pabepa, sezvo mandala sezvairi inoreva "denderedzwa". Iwe unofanirwa kuchenjerera kuti iyo dhizaini ive yakakwana sezvazvinogona ', kune izvo iwe unogona kushandisa a kambasi kana ndiro. Ipapo chete ndipo pazvinokwanisika kuwana yakanaka yekupedzisira mhedzisiro.
Watsvaga denderedzwa, iwe unofanirwa kutsvaga yepakati uye dhonza mutsetse. Wobva wadhonza imwe yakatwasuka uye ramba uchiita izvi kusvikira wawana zvakakwana. Uyu ndiwo musimboti weiyo mamandala ese aunoda kugadzira. Kubva ipapo, ingoshandisa fungidziro yako uye wedzera uta, maruva, maumbirwo ejometri, uye kunyangwe mazwi.
Asi rangarira, ivo vanofanirwa kuve nerevo pachako kwauri uye iwe unofanirwa kuzvipira iwe zvizere kune icho chigadzirwa. Kana iyo dhizaini yapera, ingoipenda mukati, uchishandisa yakajeka, yakajeka mivara.
Mandalas kupenda ☸️
Mandalas ave akakunda pasi rese. Naizvozvo, pane zvakawanda zvingasarudzika zvemadhizaini akagadzirwa uye mabhuku eruvara. Izvi zvinoita kuti vanhu vazhinji vasarudze kuita izvi kana vachiedza kutsvaga kupukunyuka kubva kumatambudziko ezuva nezuva. Kana iwe usina nguva kana hunyanzvi hwekugadzira yako mandala, heino mimwe mifananidzo iwe yaunogona kupurinda nekupenda kumba. Buda.
Iko kune chaiko mabhenefiti ekugadzira mandalas?
Ehe, mandala ave achishandiswa kwemazana emakore senzira yekuvandudza kusangana uye iwo ane chairo mabhenefiti. Nezvo, kupenda iyo mifananidzo kunogona kubatsira kudzikisa iyo kushushikana uye kushushikana . Saka kubatsira kuvandudza hupenyu hwehupenyu.
Imwe pfungwa yakanaka nezve mandalas ndeyekuti nekuda kwekusarura kwavo kwemweya, vanogona kubatsira zvakanyanya kune chero munhu anotsvaga kujekeswa. Kune avo vanongoda chido chitsva, vanogona kuve kudzidziswa kukuru mukudhirowa uye kupenda hunyanzvi.